VAN iyo TIR, maxay yihiin? maxaa loogu talagalay sidee loo adeegsadaa? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Markan waxaan dooneynay inaan dib u eegis yar ku sameyno laba erey oo si weyn looga isticmaalo aduunka ee dhaqaalaha iyo dhaqaalaha shaqadooda cajiibka ah markay tahay natiijooyinka ka soo baxa shirkadaha iyo in la ogaado haddii maalgashiga mashruuc gaar ah uu hirgeli karo, loona yaqaan NPV iyo IRR. Labadan qalab waxay kaa dhigi karaan inaad lacag badan kasbato ama ka fogaato xulashooyinka xun ee shirkadda.
1 Waa maxay NPV iyo IRR
2 Waa maxay NPV
3 Markuu qadarku doorto maal-galiyaha
4 Sidee loo adeegsan karaa NPV
5 Faa'iidooyinka NPV
6 Waa maxay IRR iyo sidee loo isticmaalaa
7 Habka noocan ah ma yahay mid la isku halayn karo?
8 Goorma la isticmaalayo VAN ama TIR
8.1 Goorma la isticmaalayo VAN
8.1.1 Waa maxay qaacidada NPV?
8.2 Waa maxay TIR maxaase loogu talagalay?
8.2.1 Goorma ayaa la adeegsadaa?
9 Sida loo ogaado haddii IRR wanaagsan tahay
10 Marka la soo koobo
Waa maxay NPV iyo IRR
NPV iyo IRR waa laba nooc oo qalab dhaqaale ah adduunyada maaliyaddu aad ayey u awood badan tahay waxaadna na siisaa suurtagalnimada in aan ku qiimeyno faa'iidada ay na siin karaan mashaariicda maalgashi ee kala duwan. Xaalado badan, maalgashiga mashruuc looma siinayo maalgashi ee waa suurtagalnimada bilaabida ganacsi kale faa iidada awgeed.
Hadda, waxaan sameyn doonnaa horudhac yar oo ka mid ah NPV iyo IRR, fikradahan lacageed si gooni gooni ah si aad u aragto sida loo xisaabinayo oo ah tan ugu fiican ee ku xiran natiijooyinka aad rabto inaad ogaato iyo fursadaha ay bixiyaan NPV iyo IRR.
Waa maxay NPV
NPV ama Qiimaha Net PresentQalabkan maaliyadeed waxaa loo yaqaanaa faraqa u dhexeeya lacagta shirkadda soo gasha iyo xaddiga lagu maalgeliyo isla wax soo saarka si loo eego haddii ay runti tahay wax soo saar (ama mashruuc) faa'iidooyin u yeelan kara shirkadda
VAN-ku wuxuu leeyahay a dulsaarka dulsaarka kaas oo loo yaqaan heerka wax goosadka waana midka loo isticmaalo in si joogto ah iskiis loo cusbooneysiiyo. Qiyaasta goos gooska ah waxaa bixiya qofka qiimeynaya mashruuca la sheegay waxaana lagu sameeyaa iyadoo lala kaashanayo dadka maalgashiga sameynaya.
Heerka goynta NPV wuxuu noqon karaa:
Danta taasi waa suuqa. Waxa aad sameysid waa inaad qaadato dulsaar muddo-dheer ah oo si fudud looga saari karo suuqa hadda jira.
Sicirka macaashka shirkadeed. Heerka dulsaarka ee waqtigaas la calaamadeeyay wuxuu ku xirnaan doonaa sida maalgashiga loo maalgeliyo. Markii lagu dhammeeyo raasamaal in qof kale maalgashaday, markaa sicirka goynta ayaa ka tarjumeysa qiimaha raasamaalka la amaahday. Markii lagu sameeyo raasamaal u gaar ah, tan ayaa leh kharash toos ah shirkadda laakiin waxay siineysaa saamileyda saamileyda
Markuu qadarku doorto maal-galiyaha
Tani waxay noqon kartaa qiime kasta oo aad dooratay.
Badanaa waxaa lagu fuliyaa iyada oo ah faa'iidada ugu yar in maalgashaduhu damacsan yahay inuu lahaado weligiisna ka hooseeyo qadarka uu ku sameynayo maalgashiga.
Haddii maalgashaduhu doonayo a qiimeyn ka tarjumeysa qiimaha fursadda, Qofku wuxuu joojiyaa helitaanka lacagta si uu u maal gashado mashruuc cayiman.
Iyada oo loo marayo NPV waad ku ogaan kartaa haddii mashruuc la hirgelin karo iyo in kale Kahor intaanan bilaabin fulinta iyo sidoo kale, xulashooyinka isla mashruuca, waxay noo ogolaaneysaa inaan ogaano midka faa iidada u leh dhamaan ama kee baa noogu fiican. Waxay sidoo kale wax badan naga caawineysaa howlaha wax iibsiga, maadaama ay dhacdo inaan rabno inaan iibino, ikhtiyaarkan ayaa wax badan naga caawinaya inaan ogaano waxa ay tahay qadarka lacagta dhabta ah ee ay tahay inaan ku iibino shirkadeena ama hadii aan kasbano wax badan ganacsi.
Sidee loo adeegsan karaa NPV
Inaad ogaato sida loo isticmaalo NPV waxaan leenahay qaaciido NPV = BNA - Investment. Van-ka ayaan horey u ogaanay waxa uu yahay iyo BNA waa macaashka saafiga ah ee la cusbooneysiiyay ama si kale haddii loo dhigo, socodka lacagta ee shirkaddu leedahay.
Habkani waa in had iyo jeer loo adeegsadaa faa iidada saafiga ah ee la cusbooneysiiyay oo aan lagu isticmaalin macaashka saafiga ah ee shirkadda si xisaabteenu aysan u dhicin. In la ogaado waxa BNA waa inaad sameysaa qiimo dhimis TD ama sicir dhimis. Tani waa heerka ugu yar ee soo noqoshada waxaana loo yaqaanaa sida soo socota.
Haddii sicirka uu ka sarreeyo BNA, tani waxay ka dhigan tahay in sicirka aan lagu qancin oo aan haysanno NPV taban. Haddii BNA uu u dhigmo maalgashiga, tani waxay ka dhigan tahay in sicirka la buuxiyey, NPV wuxuu la mid yahay 0.
Markay BNA ka sareyso waxay ka dhigan tahay in sicirka la buuxiyay marka lagu darona, waxay ku guuleysteen inay macaash sameeyaan.
Marka si dhakhso leh aan u fahanno
Markii kiiskii ugu dambeeyay, waxay ka dhigan tahay in mashruucu yahay mid faa'iido leh waadna horay ugu sii socon kartaa. Marka ay jirto kiis ay ku jiraan barbaro, mashruucu waa mid faa'iido leh maxaa yeelay faa'iidada TD ayaa lagu daray, laakiin waa inaad ka taxaddartaa. Markay dhacdo kiiska koowaad, mashruucu faa iido malaha waana inaad raadisaa xulashooyin kale.
Waa inaad doorataa mashruuca na siinaya faa'iidada dheeriga ah ee ugu fiican.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn sababta ay u tahay mid ka mid ah hababka sida baaxada leh loo isticmaalo ayaa ah iyada oo lacagaha kaashka ee saafiga ahi ay isku mid yihiin waqtigan la joogo. NPV ama Qiimaha Net Present wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo xadiga lacagta la soo saaray ama lagu daro hal unug. Intaas waxaa sii dheer, astaamaha togan iyo kuwa tabanba waxaa lagu qori karaa xisaabinta socodka ee u dhiganta lacag caddaan ah oo soo gelaysa iyo ka bixitaan iyadoo aan natiijada ugu dambeysa la beddelin. Tan laguma sameyn karo IRR taas oo natiijada ay aad uga duwan tahay.
Si kastaba ha ahaatee, NPV waxay leedahay meel daciif ah Waana in sicirka loo isticmaalay in lagu dhimo lacagta laga yaabo in gabi ahaanba aan la fahmi karin ama xitaa laga doodi karin dad badan.
Hadda, markay tahay isku-darka dulsaarka, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee leh kalsooni aad u sarreysa.
Waa maxay IRR iyo sidee loo isticmaalaa
Waa maxay IRR? IRR ama heerka soo noqoshada gudaha, waa sicir-dhimista lagu sameeyay mashruuc oo noo oggolaanaya in BNA ay ugu yaraan la siman tahay maal-gashiga. Markii laga hadlayo TIR waxay kahadashaa ugu badnaan TD in mashruuc kastaa yeelan karo si loogu arko mid ku habboon.
Si loo helo IRR sida saxda ah, xogta loo baahan doono waa cabirka maalgashiga iyo socodka lacagta caddaanka ah ee saadalka ah. Mar kasta oo la helayo IRR, qaaciddada NPV ee aan ku siinnay qaybta sare waa in la adeegsadaa. Laakiin bedelida heerka Van-ka oo 0 ah si ay noo siin karto sicir dhimisama. Si ka duwan NPV, marka sicirku aad u sarreeyo, waxay noo sheegaysaa in mashruucu aanu wax faa iido ah lahayn, hadii sicirku hooseeyo, taasi waxay ka dhigan tahay in mashruucu faa iido leeyahay Hoos udhaca sicirka, faa iidada ugu badan mashruucu waa.
Habka noocan ah ma yahay mid la isku halayn karo?
Waa inaad ogaataa in dhaleeceynta habkani soo maray ay badan yihiin heerka dhibka ay ku hayso dad badan. Si kastaba ha noqotee, maalmahan horeba way u suurtagashay in lagu sameeyo barnaamijyada xaanshida iyo xisaabaadka cilmiga ugu casrisan sidoo kale waxay la yimaadeen xulashadan lagu daray. Waxay ku guuleysteen in ilbiriqsiyo gudahood lagu qaban karo.
Habkani wuxuu leeyahay qaab xisaabeed aad u fudud markaad horayba u taqaanay sida loo adeegsado taasina waxay ku siinaysaa natiijooyin wax ku ool ah, taas oo ah el habka isdhaafsiga toosan.
Xitaa sidaas oo ay tahay, u soo noqoshada tan ugu adeegsiga iyo tan ugu weyn, waxaa la sameeyaa markii mashruuc gaar ah ay suurta gashay in la sameeyo lacag celin ama bixinno la helayo, ma ahan oo keliya bilowga laakiin inta lagu jiro nolosha waxtarka leh ee isku mid ah, sidoo kale maxaa yeelay mashruuca wuu lumay ama maalgelin cusub ayaa lagu daray.
Goorma la isticmaalayo VAN ama TIR
Labada NPV iyo IRR labaduba waa laba tilmaame oo ay si weyn u adeegsadaan xirfadlayaal, laakiin mid kasta oo ka mid ah qalabkani wuxuu leeyahay adeegsi gaar ah marka la isticmaalayo. Waana ku habboon tahay in la ogaado goorta la isticmaalayo NPV iyo goorta IRR iyo sida loo qiimeeyo natiijooyinka aad ka heshay labadaba.
Sidaa darteed, halkan waxaan kaaga tagi doonnaa qaab wax ku ool ah markii aad mid walba u adeegsaneyso.
Goorma la isticmaalayo VAN
NPV, taasi waa, qiimaha saafiga ah ee hadda jira, waa doorsoomaha ay shirkado badani u adeegsadaan inay awood u yeeshaan inay isku mid noqdaan isku socodka lacagaha. Taasi waa, in la yareeyo dhammaan lacagaha la soo saaro ama lagu daro hal shay. Intaas waxaa sii dheer, waa aaladda ay u adeegsadaan inay ku ogaadaan haddii mashruuc shaqeynayo; si kale haddii loo dhigo, haddii ay jiraan waxtarro ku saleysan wixii la geliyay.
Si tan loo sameeyo, waxay adeegsadaan qaaciddada NPV = BNA-Investment. Sidaa darteed, haddii maalgashigu ka weyn yahay BNA, tirada laga helay NPV waa mid taban; haddii ay caksi tahayna waxay ka dhigan tahay in macaash jiro.
Marka goorma ayaa la isticmaali karaa? Hagaag, markaad rabto inaad ogaato in macaashkaaga saafiya runti uu kugufilan yahay ama inaad khasaaro kuhesho. Xaqiiqdii, tan waa in loo adeegsadaa qaab sanadle ah, in kasta oo run ahaantii tirooyinka la sawiri karo waqti kasta oo sanadka ah (laakiin had iyo jeer xog illaa taariikhdaas).
Waa maxay qaacidada NPV?
Waa ku xiga:
Ft waa socodka lacag caddaan ah xilli kasta (t).
I0 waxay u taagan tahay maalgashiga bilowga ah.
n waa tirada muddooyinka la xisaabinayo.
k waa sicir -dhimista.
Waa maxay TIR maxaase loogu talagalay?
Hadda oo aad u weecato IRR, waa inaad maanka ku haysaa in, sidaan kuu sheegnay, aysan la mid ahayn NPV, waa laba qalab oo gebi ahaanba kala duwan oo cabbira waxyaabo la mid ah, laakiin isku mid ma aha.
El Qiimaha IRR waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo in mashruuc faa'iido leeyahay iyo in kale, laakiin wax kale maahan. Qaaciddada la isticmaalay waxay la mid tahay ta NPV, laakiin xaaladdan NPV waa 0 ujeedduna waa in la ogaado sicir-dhimista, ama maalgashiga.
Marka, sare u kaca qiimaha ku soo baxa qaaciddadaas, waxay ka dhigan tahay in mashruucu ka macaash yar yahay. Laakiin ka hooseeya waa ka faa iidada badan.
Goorma ayaa la adeegsadaa?
Goormaase la isticmaali karaa? Kiiskan, Waa tilmaamaha ugufiican ee lagu qiimeeyo faa iidada ama maahan mashruuc gaar ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku siinaysaa xog gaar ah, laakiin tan lama barbar dhigi karo xogta mashruuc kale, gaar ahaan haddii ay ka duwan yihiin, sababtoo ah waxaa jira ciyaaryaal badan oo beddelaya (tusaale ahaan, in mid ka mid ah mashaariicdu ay bilowdo wax yar ka dibna ay qaadato off, ama taasi waqti badan ayey ku sii jirtaa).
Guud ahaan, NPV iyo IRR labaduba waxay muujinayaan in mashruuc la fulin karo iyo inkale, taasi waa, in dheefo lagu heli doono iyo inkale. Ma jiro qalab ka fiican ama mid kale oo tan lagu sameyn karo, maaddaama labada NPV iyo IRR ay is dhammaystirayaan isla markaana maalgashadayaashu ay tixgelinayaan natiijooyinka labadaba ka hor intaanay go'aan gaarin.
Sida loo ogaado haddii IRR wanaagsan tahay
Dhammaan wixii aan kuu sheegnay ka dib, waxaan shaki ku jirin in tilmaamaha culeyska ugu badan yeelan kara marka ay timaado ogaanshaha in mashruuc uu wanaagsan yahay iyo in kale uu yahay heerka gudaha ee soo noqoshada, taas oo ah, IRR. Laakiin sidee ku ogaan kartaa in IRR ay wanaagsan tahay ama aysan ku jirin mashruuc?
Markaad qiimeyneyso qiimahan, taasi waa, IRR, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo laba arrimood oo aad muhiim u ah. Kuwani waa:
Baaxadda maalgashiga. Taasi waa, lacagta lagu bixin doono in lagu fuliyo mashruucaas.
Socodka lacagta caddaanka ah ee saadaasha ah. Taasi waa, waxa lagu qiyaaso in la gaaro.
Si loo xisaabiyo IRR ee meheradda, isla qaaciddada NPV ayaa la adeegsadaa; laakiin halkii aad tan ka heli lahayd, waxaad samaynayso waa inaad ogaato waxa sicir -dhimistu tahay. Markaa, qaacidada IRR waxay noqon doontaa:
NPV = BNA - Maalgashi (ama qiime dhimis).
Maaddaama aanan dooneynin inaan helno NPV, laakiin halkii maalgashiga, qaaciddadu waxay u egtahay sidan:
0 = BNA - Maalgashi.
BNA waxay noqon laheyd socodka lacagta ee saafiga ah halka aniga waa waxa ay tahay inaan xalinno.
Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad haysato mashruuc shan sano ah. Waxaad maalgelisaa 12 euro iyo, sannad walba, waxaad leedahay lacag caddaan ah oo saafiga ah oo ah 4000 euro (marka laga reebo sannadkii hore, oo ah 5000). Sidaa darteed, qaaciidadu waxay noqon doontaa:
Tani waxay na siinaysaa natiijada ah inaan la mid yahay 21%, taas oo noo sheegaysa inay tahay mashruuc faa'iido leh, iyo in IRR ay wanaagsan tahay, haddii ay runti tahay waxa la filayo in la helo. Xusuusnow in qiimaha ka hooseeya, ka faa iidada badan ee mashruuca aad falanqeyneyso yeelan doono.
Waana halkaan halka laga filayo filashada faa'iido. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad hayso mashruuc u muuqda mid faa’iido badan leh oo soo jiidasho leh. Taasna waxaad rajeyneysaa inaad ka hesho faa'iido ugu yaraan 10% isaga. Markaad lambarro sameyso ka dib, waxaad arkaysaa in mashruucu kuu soo celinayo 25%. Taasi waa wax aad uga badan intaad filaysey, sidaa darteedna waa wax soo jiidasho leh taasna waxay kuu sheegeysaa in IRR ay wanaagsan tahay.
Taabadalkeed, qiyaasi taas bedelkeeda 25%, waxa IRR ay ku siiso waa 5%. Haddii aad dhalisay 10, oo ay ku siinayso 5, rajooyinkaagu aad bay hoos ugu dhacaan, iyo inaad ka fikirto mooyee mooyee, mashruucaasi sidaas uma wanaagsana (oo ma lahan IRR wanaagsan) oo ku saleysan maalgashigaaga.
Guud ahaan, ganacsi badbaado leh, oo aan qatar ku jirin, wuxuu soo sheegayaa IRR wanaagsan, laakiin mid hooseeya. Dhinaca kale, markaad ku sharraxdo ganacsiyada u baahan khatar yar, illaa iyo inta aad ku shaqeyneyso madaxa iyo aqoonta, waxaad filan kartaa inay jiri doonto IRR oo lagu daray wax sidaas darteed, ka sii fiican. Tusaale ahaan, hadda mashruucyada teknolojiyadda, ama kuwa la xiriira qaybaha aasaasiga ah (beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga) waxay noqon karaan kuwo faa iido iyo faa'iido leh.
IRR ama heerka gudaha ee soo noqoshada ayaa ah tilmaame aad loogu kalsoonaan karo marka ay timaado faa iidada mashruuc gaar ah. Marka la isbarbar dhigo heerarka gudaha ee soo noqoshada laba nooc oo mashruucyo kala duwan ah, farqiga suurtagalka ah ee ka jiri kara cabirradooda lama tixgelinayo.
Haddaba, ka dib markii aan waxaas oo dhan ognahay ayaan la yaabanahay waa fududahay in la fahmo? Miyaynu horey u ogaanay waxa VAN iyo TIR?
Waxay noqon kartaa bilowga VAN iyo IRR inay yihiin laba eray oo waxoogaa ku wareerinaya laakiin waxqabadka shirkaddaada iyo wixii ka sarreeya oo dhan si aadan lacag u lumin waxay yihiin kuwa ugu muhiimsan, maadaama aad taas ku mahadsan tahay waxaad ogaan kartaa goorta mashruuc runti faa iido ayuu kujiraa taas oo aad ku maalgashan karto ama hadii aad ikhtiyaar u leedahay inta udhaxeysa dhowr mashruuc, waad ogaan kartaa mashruuca faa iidada badan leh.
Sidoo kale wuu kuu oggolaanayaa ogow marka mashruuc aanu macaash ahayn waa maxay farqiga aad u joojin doonto guusha.
Sidaa darteed, labadaba NPV iyo IRR waa qalab maaliyadeed oo dhameystiran waxayna na siin karaan xog qiimo leh oo ku saabsan shirkadaha ama mashaariicda aan diyaar u nahay inaan maalgashano, iyagoo hubin doona inaan marwalba ku helno 100% faa iidooyinka mashaariicda aad rabto inaad fuliso.
Soo ogow waxa ROE ama Return on Equity ay tahay:
Waa maxay ROE?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » VAN iyo TIR
Waad salaaman tihiin, way fiicnaan laheyd haddii aad ku darto qaacido iyo tusaalooyin
Macluumaad fiican !!!
Waad ku mahadsan tahay sida aad noo siisay mowduucan oo faahfaahsan.
Ku jawaab Lucy Gutierrez
Waxaan jeclaan lahaa inay jiraan qaacido iyo tusaalooyin
Jawaab SANDRA RODAS
MACLUUMAADKA AAD AYAAD U FAHAN YAHAY, SI AAD U ARAGTO HADDII AAD SHAQAYSATO TUSAALOOYINKA CODSIGA, WAAD MAHADSAN TAHAY MACLUUMAADKA
naxdin ceverina dijo
kan wanaagsan, fadlan ma ku dari lahayd tusaale yar, layli. Hambalyo.
waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga
Ku soo jawaab Ceverina Shock
Subax wanaagsan, nin aad u wanaagsan oo wanaagsan, sharraxaadda iyo si aad waxtar badan u yeelato waa tusaalayaal wanaagsan oo leh qaaciidooyin sidaasna aad ku dhaqan gelin karto waxa aragti ahaan u soo ifbaxaya, mahadsanid waxaanan rajaynayaa xafiisyadiinna wanaagsan.
Ku soo jawaab Cesar Noguera
Caawinta shaqo la'aanta kadib